SanDisk iXpand Base, chaji iPhone gị ma mee nkwado ndabere n'otu oge | Akụkọ akụrụngwa
SanDisk iXpand Base, chaji iPhone na nkwado ndabere n'otu oge
Eziokwu bu na idapu mkpanaka gi abughi nani ihe ojoo n'ihi onu ahia ya, kamakwa o bu ihe siri ike - ma dikwa egwu - n'ihi otutu ozi nzuzo anyi na-ebugoro. N'otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na ị bụghị otu n'ime ndị na-ejikarị ọrụ dị ka Google Foto iji mee ka ndabere foto gị niile, Bụrụ na nke ọnwụ nke mobile, ihe ga-jọrọ njọ naghachi ndị niile na-echeta.
Agbanyeghị, ọhụụ kachasị ọhụrụ sitere na SanDisk, otu n’ime ụlọ ọrụ na - eduga na nchekwa ekwentị, maka ndị ọrụ niile nwere Apple mobile, iPhone. Maka ha SanDisk iXpand Isi, ebe pere mpe nke nwere nchekwa dị n'ime. Na na, na mgbakwunye na-ebu si kwa ụbọchị ibu nke Apple mobile, ọ ga-ndabere mwute ozi dị ka foto, vidiyo na kọntaktị.
Tozọ esi arụ ọrụ dị mfe. I nwere SanDisk iXpand Isi, ị jikọọ ya wee jikọọ iPhone site na eriri. Ndabere ga-elekọta onwe ya na-ebu batrị ekwentị ma na -emepụta ndabere kwesịrị ekwesị. Na mgbakwunye, onye ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti ikike nchekwa dị iche iche nke ngwa SanDisk a. Nwere ike ịchọta ya na ikike 32, 64, 128 na 256 GB. Mkpebi bụ nke gị, na mgbakwunye na ịmara ozi ole ị na-echekarị na kọmputa gị.
N'otu aka ahụ, SanDisk iXpand Base nwere ngwa nke ya. Na nke a ga-ekwe ka na niile na ozi nwere ike kpofuru ọzọ na a ọhụrụ iPhone ma ọ bụ na otu otu mgbe a mweghachi. Ahịa dị ka ndị a: 49,99 dollar maka ụdị 32GB. Otu olu n'elu bụ ụdị nke 64GB nke ga-efu $ 99,99. Ezie na elu na nsụgharị (128 na 256 GB) ga-ọnụ na $ 129,99 na $ 199,99, n'otu n'otu. Mana dịka anyị si agwa gị, enwere ụzọ ndị ọzọ dị ọnụ ala. Ndị a dabere na ọrụ ntanetị nwere ike inyere gị aka. Na mgbakwunye na ịnye gị ohere na-akparaghị ókè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » SanDisk iXpand Base, chaji iPhone na nkwado ndabere n'otu oge
Igwe friji Panasonic a kachasị njọ maka ibi ndụ na-anọkarị